Galaxy A9 2018: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Galaxy A9 2018: ny Samsung voalohany misy fakantsary efatra aoriana
Rehefa afaka herinandro maromaro misy famoahana maromaro dia tonga ny andro. Samsung dia efa nanolotra ny Galaxy A9 2018, ny telefaona voalohany misy fakantsary miverina efatra. Efa nianatra bebe kokoa momba ity fitaovana ity izahay, ary manomboka izao dia ofisialy. Telefaona iray mampiseho ny fiovana izay ampidirin'ny orinasa koreana amin'ireo laharany. Amin'ny ambaratonga teknika dia mahita telefaona antonony isika.
Ireo fakan-tsary efatra any aoriana ireo no tena mahasarika ny sain'ny rehetra amin'ity Samsung Galaxy A9 2018. Na dia tsy mandiso fanantenana aza izy io amin'ny lafiny famaritana. Modely tsara, izay miloka ihany koa amin'ny endrika amam-bika ankehitriny. Inona no azontsika antenaina amin'ity fitaovana ity?
Hitanay ny fomba fampidiran'ny marika Koreana ny fiovana marobe amin'ny fari-taniny. Tsy ho ela dia hisy kisary fitaovana vaovao, ary ny hafa hongotana. Ny elanelan'ny Galaxy A dia hijanona ho iray amin'ireo andrin'ny orinasa. Zavatra iray asehon'izy ireo amin'ity finday vaovao ity. Atorinay anao aloha ny mombamomba azy.
1 Famaritana Galaxy A9 2018
Famaritana Galaxy A9 2018
The Galaxy A9 2018 tonga hanamafisana ny elanelan'ny orinasa koreana amin'ny lafiny famaritana. Izy io dia manana efijery lehibe, misy fefy manify ary tsy misy lohany, toy ny mahazatra amin'ny telefaonan'ny orinasa. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
efijery: Super AMOLED 6,3-inch miaraka amin'ny vahaolana FHD + 2.220 x 1080 teboka ary ny tahan'ny 18,5: 9
Fitahirizana anatiny: 128GB (azo ovaina hatramin'ny 512GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: 24 MP f / 1.7 + 10 MP f / 2.4 Telephoto + 8 MP f / 2.4 120º + 5 MP f / 2.2 Live Focus
Fakan-tsary eo aloha: MP 24 miaraka amin'ny vava f / 2.0
bateria: 3.800 mAh miaraka amina fiampangana haingana
Conectividad: GPS, USB Type-C, Dual SIM, 4G
ny hafa: NFC, mpamaky sidina aoriana
Rafitra fandidiana: Android Oreo miaraka amin'ny Samsung Experience
Dimensions: X X 162.5 77 7.8 MG
lanja: Gramin'ny 183
Tsy diso fanantenana ny telefaona raha ny amin'ny famaritana teknika no resahina. Manaraka tsara amin'io lafiny io izy, manana endrika tsara izy ary ny fakan-tsary no teboka matanjaka omeny. Satria lasa toy izao ny Galaxy A9 2018 amin'ny voalohany eny an-tsena mba hananana fakantsary efatra aoriana. Dingana iray lehibe ho an'i Samsung, izay mikasa ny hampiorina ny tenany ho iray amin'ireo zava-baovao indrindra eo amin'ny tsena Android. Ity maodely ity dia dingana tsara amin'io lafiny io.
Ny marika ihany koa dia manatevin-daharana ny fironana ny loko gradient, izay natombok'i Huawei tamin'ny faran'ny volana martsa tamin'ity taona ity. Filokana tsara, satria toa liana be amin'ireo karazana maodely ireo ny mpanjifa. Manome zavatra manokana ny endriny, ary misarika ny saina betsaka izy ireo.
Samsung te hampiditra ny sasany fakan-tsary avo lenta ao amin'ity fitaovana ity. Fakan-tsary efatra amin'ny fitambarany, samy natokana ho an'ny asa manokana, araka ny hitantsika tamin'ny fanondroana azy ireo. Ka ho afaka haka sary mahavariana amin'ny alàlan'ity finday ity ny mpampiasa. Manantena izahay fa hahita sary vitsivitsy nalaina niaraka tamin'ity Galaxy A9 2018 ity atsy ho atsy, mba hahitana ny kalitaon'izy ireo. Satria mampanantena ny tsy handiso fanantenana an'io lafiny io.
Ho an'ireo liana amin'ity marika afovoany vaovao an'ny marika Koreana ity, hisy loko telo hisafidianana. Araka ny efa nolazainay, izy rehetra dia miloka amin'ny gradient, araka ny hitantsika tany amin'ny farany Huawei. Ny loko azo isafidianana dia: Caviar Black (mainty), Lemonade Blue (manga) ary Bubblegum Pink (mavokely). Toa izy ireo ihany no hamoahana ny telefaona eny an-tsena.
Andrasana noho izany manomboka amin'ny volana Novambra dia afaka mividy an'ity Galaxy A9 2018 any Espana ity ianao. Ny daty manokana dia mbola tsy nomena tamin'ny volana, fa rehefa hanomboka izy io dia hampahafantarinay anao izany. Fa ao anatin'ny efa-bolana dia hamidy amin'ny fomba ofisialy eto amintsika izany. Ho fanampin'izay, efa manana ny vidiny isika.
Ny Galaxy A9 2018 dia sarany 599 euro amin'ny fandefasana azy any Espana. Ny zavatra mety hitranga indrindra dia ny fampiroboroboana amin'ny telefaona an-tariby ireo mpandraharaha samihafa, ka amin'ny volana novambra dia ho fantatray ireo vidiny ireo Hihaino tsara ny famoahana azy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Galaxy A9 2018: ny Samsung voalohany misy fakantsary efatra aoriana
Ny fiheverana ny kalitao miavaka amin'ny selfie vondrona nalaina tamin'ny Google Pixel 3
Efa amidy ny Chromecast 3, fa tsy any Espana na Amerika Latina